Ukuhlolwa Komsebenzisi: Ukufuna Okubanzi Komuntu Ukuze Kuthuthukiswe Okuhlangenwe Nakho Kwekhasimende | Martech Zone
Ukushumeka i-HTML akutholakali.
Ukumaketha kwanamuhla kumayelana nekhasimende. Ukuze uphumelele emakethe egxile kumakhasimende, izinkampani kumele zigxile kokuhlangenwe nakho; kumele bazwelane futhi balalele impendulo yamakhasimende ukuze baqhubeke bathuthukisa okwenziwayo nabakulethayo. Izinkampani ezamukela ukuqonda kwabantu futhi zithole impendulo esezingeni elifanele evela kumakhasimende azo (futhi hhayi nje idatha yocwaningo) ziyakwazi ukuxhumana kangcono nokuxhumana nabathengi namakhasimende azo ngezindlela ezizwakalayo.
Ukuqoqa ukuqonda kwabantu kufana nokuzibeka ezicathulweni zamakhasimende akho ukuze ufunde, uqonde futhi uguquke ngezidingo zawo. Ngokuqonda kwabantu, izinkampani ziyakwazi ukuthwebula ubuhlakani obudingekayo ukuze kufinyelele ikhasimende ngezindlela ezintsha, ezintsha, nezisebenzayo ezingaba nomthelela omuhle ekubuyiseni imali, ukugcinwa kanye nokwethembeka.
Ukuhlolwa komsebenzisi: Ukubuka konke komkhiqizo
Okuhlangenwe nakho okubi kumawebhusayithi nakuzinhlelo zokusebenza, nasemhlabeni wangempela, akukhathazi nje amakhasimende, kubiza izinkampani izigidi zamadola ngonyaka. UmsebenzisiUkuhlola kwenza kube lula ukuthi izinhlangano zithole impendulo efunwayo emakethe yazo eziqondisiwe — noma ngabe zikuphi. Ngeplatifomu efunwayo ye-UserTesting, izinhlangano zingathola ukuthi 'kungani' ngemuva kokusebenzisana kwamakhasimende. Ngokuqonda inhloso, amabhizinisi angathuthukisa futhi anikeze okuhlangenwe nakho okumangazayo, avikele umkhiqizo, futhi aqhube ukwaneliseka okukhulu kwamakhasimende. Ngeplatifomu ye-UserTesting, amabhizinisi anga:
Target- Thola bese uxhuma nezithameli eziqondile ezidingekayo, ngaphandle komzamo, imijikelezo emide noma izindleko ezihlotshaniswa nokuqasha abantu ngesandla ukuthi banikeze impendulo.
Finyelela abathengi kanye nochwepheshe bebhizinisi abavela kuwo wonke umhlaba ngokufunwa ngephaneli enkulu kunazo zonke, ehluke kakhulu yabahlanganyeli bokufunda.
Thepha kumakhasimende, abasebenzi, kanye nozakwethu nge-imeyili, imithombo yezokuxhumana noma ezinye iziteshi.
Ngena kuma-personas athile, usebenzisa amakhono wokuhlunga, njenge-geographic, demographic, kanye nenqubo yezenhlalo nezomnotho.
Xhuma nezithameli ezikhethekile futhi kunzima ukufinyelela kuma-panelists ngosizo lweqembu lethu lochwepheshe.
Qiniseka ukuthi uthola impendulo esezingeni eliphakeme ukwazisa imizamo yakho ye-CX ngomsebenzisi weqembu lokuqala oqinisekisiwe nophicothiwe wephaneli lomthengi webhizinisi.
Zibandakanye- Khetha uhlobo lwezivivinyo ezizokhipha imininingwane esebenziseka kakhulu, engenzeka ngaphandle kwezinkinga zokuphatha noma isidingo sobuchwepheshe bokucwaninga.
Thola izimpendulo ngamahora angama-1-2 usebenzisa izifanekiso, ukuqasha okuzenzakalelayo, nezici zokuhlola noma yimuphi umuzwa.
Thola impendulo kunoma yini, efana nedeskithophu, uhlelo lokusebenza lweselula, noma okuhlangenwe nakho okusemqashweni, nemikhiqizo kunoma yisiphi isigaba sokuthuthuka.
Ukusetha okulula ukuze noma ngubani eqenjini lakho akwazi ukudala izifundo ezibukhoma noma ezirekhodiwe zayo yonke iphrojekthi, nganoma yisiphi isikhathi.
Imiphumela engakapheli amahora isho ukuthi ungavivinya noma yini odinga ukuqonda kwamakhasimende kuyo, ususe ukuqagela ngemuva kokutshalwa kwezimali kwebhizinisi lakho - noma ngabe lokho kuyizibonelo zomkhiqizo, ukubhalwa kokuklama, imilayezo yezentengiso, izithombe zomkhankaso, ikhophi lewebhu.
Sebenza nochwepheshe bethu lapho udinga usizo ekwakheni izifundo eziyinkimbinkimbi ngokwengeziwe.
Qonda- Thwebula futhi ubonise ukuphendula okunengqondo nezimpendulo, bese ukhulisa kuyo yonke inhlangano ukukhulisa ukusebenzisana nokuvumelana.
Ngayo yonke imininingwane yamakhasimende endaweni eyodwa, ukuhlaziywa okusheshayo kungenzeka ngokudweba kusuka endaweni yonke yedatha.
Khipha bese uqokomisa ubuhlakani bamakhasimende obubucayi ukushayela ukuvumelana ngezinqumo ezifanele nezinyathelo ezilandelayo.
Ukwabelana ngamakhono kwenza kube lula ukuhlanganisa okutholakele kuyo yonke inhlangano.
Ngena kubabambiqhaza ngokwethula ubufakazi obucacile, obungenakuphikwa bokuthi amakhasimende afunani, adingani futhi alindeleni.
Ukuhlolwa komsebenzisi: Kusebenza kanjani
Ukuhlolwa komsebenzisi: Izici ezibalulekile
I-UserTesting iyaqhubeka nokwenza ngcono i- ipulatifomu yokuqonda komuntu futhi ngingeze igalari entsha yesifanekiso, izici zokugeleza kokuvunywa, ukuhlolwa kwezihlahla, ukuhlanganiswa neQualtrics XM Platform, namathegi ahlakaniphile.
Hlanganisa izibalo nempendulo yevidiyo ukuqonda ukuthi “kungani” ngemuva kokulindelwe kwamakhasimende
Hlanganisa ipulatifomu yabo yeQualtrics XM ukukhulisa idatha yocwaningo ngemininingwane yekhwalithi, okuletha umongo omkhulu kokuthi "kungani" ngemuva kwemiphumela yocwaningo.
Sebenzisa imishini yokufunda ukuze iveze ngokushesha izikhathi zamakhasimende ezibaluleke kakhulu
Sebenzisa amathegi ahlakaniphile ukuthola nokuqonda izikhathi ezibaluleke kakhulu kuseshini yempendulo yevidiyo
Sebenzisa imodeli yokufunda komshini ukuhlola impendulo yevidiyo nokuhlaziywa ngesikhathi sangempela.
Ukuhlola Umsebenzisi Wami - MyRecruit inika amandla izinkampani ukuthi zingene kumakhasimende abo, abasebenzi kanye nozakwethu ukuze baqoqe imininingwane kanye nempendulo. Ekuhlolweni kokuhlangenwe nakho kwezithameli ebezivele zikhona, izinkampani zingaqinisekisa ukuthi zikhomba izidingo zebhizinisi ezithile ezingafinyelelwa njengamanje.
Ngokuqashwa Kwami, unga:
Hlanganisa okufunwayo, okwenzekayo, impendulo evela kumakhasimende akhona, ochwepheshe bemboni, nokuningi.
Thola ukuqonda ngokushesha okukhulu ngokuzihlola kokuziphilisa ngokuphelele ngezithameli eziqondiswe kakhulu.
Bandakanya abasebenzi futhi ukhiqize injabulo ngomkhiqizo nemikhiqizo yakho.
Ingxoxo Ebukhoma Yomsebenzisi - Ingxoxo ebukhoma inikezela ngenhlolokhono ebukhoma, eyenganyelwe erekhodwa ngokuzenzekelayo futhi ibhalwe phansi ukuqinisekisa ukuthi konke okufundwayo kuyabanjwa futhi kuyabiwa kuyo yonke inhlangano. Ingxoxo ebukhoma inika amandla usuku olufanayo, 1: 1 izingxoxo zamakhasimende ezisebenzayo futhi isekela izwi lezinhlelo zamakhasimende. Ababuzayo bayakwazi ukucubungula izinkomba ezingezona ezokukhuluma, njengobuso nobuso bezwi ukuze bazwisane kangcono nomsebenzisi wokugcina - futhi bangashesha ngokushesha noma baqondise ingxoxo ukuthi ibambe izihloko ezithile noma iqhubeke nokuqonda umbono wamakhasimende. NgeNgxoxo Ebukhoma, ababambiqhaza banikezwa ithuba lokunikeza umongo owengeziwe emibuzweni, babelane lapho kuhlangatshezwana khona nezinselelo, futhi banikeze inkampani imibono yokwenza ngcono.
Ucwaningo lomuntu wesithathu lukhombisa ukuthi amaqembu okugxila ngaphakathi kubantu angaba nezinselelo eziningi. Phakathi kwalokhu ukubandakanya isikhathi, inkinga yokuqasha abahloli abafanele, ukucabanga kweqembu, nezindleko eziphakeme kanye nokuchema kwesampula. I-UserTesting yehlisa lezi zingqinamba ngokwenza ucwaningo lomsebenzisi (olulinganisiwe noma olungavunyelwe), ukucela impendulo yamakhasimende kanye / noma ukufaka izingxoxo ze-1: 1 ezilula, ezingabizi, ezifunwayo nesikhathi sangempela.
Inani Lebhizinisi Lokuhlangenwe nakho Okukhulu Kwekhasimende
Ngokuvumelana ne Forrester, Amaphesenti angama-73 ezinkampani abheka isipiliyoni samakhasimende njengokubaluleke kakhulu, kepha iphesenti elilodwa kuphela lezinkampani eletha umuzwa omuhle kakhulu - kepha uma ufuna amakhasimende akho ukuthi ahlale ethembekile kufanele uzibophezele ekwakheni isipiliyoni. Ukuze ube nomthelela omuhle emalini engenayo, kufanele uphathe futhi utshale kulwazi lwamakhasimende futhi wamukele ukufunda okuqhubekayo nokutholwa ukuze uhlale uphinda futhi uthuthuka kulwazi oluletha kumsebenzisi wokugcina. Namuhla, ubuholi bemakethe nokwehlukaniswa kokuncintisana kuya ngokuya kunqunywa ukuthi ngubani ohlinzeka ngomuzwa omuhle kakhulu wamakhasimende. Izinkampani ezitshala imali ku-CX ziyahlomula ngokugcinwa kwamakhasimende okuthuthukisiwe, ukwaneliseka kwamakhasimende kanye nokwanda kwamathuba okuthengiswa nokuthengiswa kwamathuba.
Manje sesisesikhathini lapho ulwazi lwamakhasimende lubalulekile emgqeni wenkampani. Amakhasimende asekela isipiliyoni esihle kulokho acabanga ukuthi kungakuhle; akususelwa kokuhlangenwe nakho abake baba nakho esikhathini esidlule. Ngenxa yalokhu, kubalulekile ukuhlinzeka izinkampani ngemininingwane eziyidingayo ukuze ziqhubeke zithuthukisa ukuhlangabezana nokulindelwe kwamakhasimende.
U-Andy MacMillan, isikhulu esiphezulu se-UserTesting
Bhalisela Isivivinyo Samahhala Somsebenzisi
Tags: U-Andy MacMillanisipiliyoni samakhasimendeamasu wesipiliyoni samakhasimendecxIbhizinisiamathuluzi okuphendulaumklamo ogxile kubantuIqembu le-Intercontinental Hotelsingxoxo ebukhoma-Microsoftukuhlaziywa kohlelo lokusebenza lweselulaimpendulo yohlelo lokusebenza lweselulaukuhlolwa kohlelo lokusebenza lweselulaukuqasha kwamiemisha umkhiqizoAma-Qualtrics XMimpendulo yesayithitestingukuhlolwa komsebenzisiukungenisaizwi lekhasimendewalmart canada